September 5, 2021 April 26, 2022 0
Munguva pfupi yapfuura Xiaomi akapfuura Samsung kuti ive hombe yepasi rose ye smartphone, maererano neshumo yekutsvaga counterpoint muna Chikunguru 2021. Asi kunze kwemafoni efoni, chakatengeswa chigadzirwa chikamu neXiaomi yavo Fitness bhendi inonzi Mi Band, uye yazvino yekuwedzera kune iyo lineup. ndiyo ichangobva kuziviswa Mi Band 6 inouya nechiratidziro chakakura uye SpO2 kuteedzera ino nguva. Nhasi ndiri pano kuti ndigovere matipi epamusoro makumi maviri nematanho aunofanira kuedza pane yako Mi Band 20 kuti unyatsoishandisa.
Wepamusoro Akavanzika Matipi uye Matipi eMi Bhendi 6
Auto Screen kubva nguva
Nyaya yakajairika pese paunogona kupfeka ndeyekuti iyo skrini inokurumidza kubuda, izvi zvinogona kuve zvinonetsa kana iwe uchiita chimwe chinhu pabhendi rako. Uine Mi bhendi 6 iwe unogona kuwedzera ino nguva kusvika pamasekondi gumi, izvo zvakanaka zvakakwana kuita chimwe chinhu.
Swipe Vertically pane yako Mi Band 6
Enda kune zvinogadziriswa
Dzvanya paAuto Screen kubva uye woisa kumasekondi gumi
Screen Yekumutsa nzira
Kune nzira dzakawanda dzekumutsa sikirini yeMi Band 6, iwe unogona kusarudza kukwirisa kuti umuke kana kutsvaira kumusoro kuti umutse iyo skrini kumusoro. Izvi zvinogona kuitwa seinotevera:
Dzvanya paScreen wakeup, uye sarudza nzira yaunoda zvakanyanya
Pamwe chete neizvi, iwe unogona zvakare kugonesa, kudzima, kana kuronga iyo yekusimudza kumutsa chimiro kubva kuapp. Iwe unogona zvakare kuwedzera yekumhanyisa kumhanya iyo inotora rova ​​pane hupenyu hwebhatiri.
Vhura iyo Mi Fit / Xiaomi Wear App
Enda kuProfile, Sarudza Mi Band 6
Tapira Simudza kuti umuke pasi peZvimwe Zvirongwa
Night Mode paMi ​​Band 6
Isu tinowanzo pfeka mabhendi akangwara uye mawatch patinenge takarara futi kuitira kuti titeedzere yedu yekurara maitiro, nguva, nezvimwe. Iyo inopenya mwenje inogona kukukanganisa iwe usati warara, uye inogona kukanganisa yako kurara kutenderera. Mi bhendi 6 ine yehusiku modhiyo yeiyi futi, iyo nzira yemanheru inoderedza kupenya kwakanyanya, uko kunogona kuchinjirwa kune zvakajairwa nekugadzirisa man'a kupenya.
Tinya paNzira yeManheru, uye wozoiseta kuti ivhure mushure mekuvira kwezuva kana kurongedza
DND Maitiro paMi ​​Band 6
Pane imwe nzira yekukubatsira iwe kurara zvirinani kana kumbowana zororo kubva kune yako Mi Band, uye ndiyo DND modhi. Inogona kuve auto-inogoneswa kana iwe ukaibvisa paruoko rwako kana kukotsira, iwe unogona kunyange kumisikidza DND yenguva yakatarwa furemu futi.
Dzvanya paDND, sarudza sarudzo inokodzera iwe zvirinani
Tsika Vibration Mhando
Iyo Vibration mota yeMi Band 6 yakasimba chaizvo zvekuti inogona kukuzunza kumusoro nyore, ungangoda kuti izvo zviitike nguva yega yega iwe yaunogamuchira ziviso. Kugadzirisa izvi iwe unogona kuseta yetsika vibration pateni (kufenda kana kusimba) kune yega yega mhando yekuzivisa, izvi zvakare zvinokuzivisa iwe kuti nei bhendi rako richidedera usina kana kuritarisa. Matanho ekumisikidza tsika vibration pateni paMi ​​band 6:
Tinya paVibration pasi peZvimwe Zvirongwa
Sarudza chiitiko, uye tinya paGadzira Nyowani Vibration
Tinya pachiratidziri kuti uite pateni
Dhinda Ridza kuti unzwe pateni pane bhendi (tinya rekodhi kuti ugadzire nyowani)
Dzvanya paDone kuti uchengetedze
Auto Workout kuona
Mi Bandi akarongeka chaizvo pakuyera zviitiko, asi pane mukana wekuti iwe uite zvimwe zviitiko kazhinji uchienzaniswa nezvimwe. Pane zviitiko zvishanu zvekusarudza kubva, uye unogona kuzvisarudzira zvese kana uchida. Izvi zvinokanganisa hupenyu hwebhatiri sezvo bhendi richizoramba richiongorora chimiro chako chebasa.
Svetera wakamira pane yako Mi Band 6
Enda kumasetter, uye tora pane Tsvaga Chiitiko
Sarudza zviitwa zvaunoita kazhinji (Kufamba, Kumhanya, Kuchovha, Elliptical, Kukwasva Mushini)
Mi band 6 inotsigira inosvika makumi matatu mamodheru ekudzidzira, uye kana iko kurovedzwa iwe kwaunoita kazhinji uye kazhinji kusingafukidzwe pamusoro, ipapo kumisikidza iko kurovedzwa kwesarudzo yako kunogona kutora nguva. Kuti upfupise nguva ino, uye nekukurumidza kusvetukira kubasa rekuita, unogona kufambisa mashandiro esarudzo yako kumusoro kwerondedzero kuti uwane nyore.
Pasi pezvimwe Zvirongwa, tinya paKushanda
Wedzera kana bvisa kudzidzira uchishandisa iyo minus (-) uye plus (+) mabhatani, uye fambisa chinzvimbo chekudzidzira pane yako Mi Band 6
Dzivirira kugovera data renzvimbo kune iro gore
Nekutadza, yega yega Mi band inogovera iyo data dhata kune iro gore. Kana iwe usiri kuda kugovera iyi data ipapo inogona kumiswa kubva kuapp.
Enda ku profile
Tinya pane yekuwedzera bhatani bhatani kumusoro kurudyi, uye tinya pazviruva
Ita kuti iko kuchinja kwekumbomira kwekugovana nzvimbo
Wedzera Widgets paMi ​​Band 6
Hazvingave zvakanaka here kana iwe ukagona kuwana izvo zvaunofarira uye nekushandisa zvakanyanya, kumberi kumberi nepakati. Ndipo panouya kutamba.
Pasi Pedzimwe Zvirongwa, tinya pane Widgets
Wedzera, bvisa, kana chinja chinzvimbo chemawadhi kusvika pane zvaunofarira
Rongedza Mapurogiramu paMi ​​Band 6
Kungofanana nemaWorkout modes iwe kana iwe ukashandisa zvinopfuura zvitanhatu maficha pane yako Mi Band 6, uye majeti haana kukwana kuti ufukidze iwo ese. Ipapo unogona kurongazve maapplication eMi band yako 6 uye woachengeta kumusoro kuti uwane nyore.
Pasi pezvimwe Zvirongwa, tora paApp
Wedzera, bvisa, kana chinja chinzvimbo cheAapps pane zvaunofarira
Yevakadzi Yekutenderera Kutsvaga paMi ​​Bhendi 6
Mi Band 6 inouyawo neVakadzi Cycle Tracking, inova danho rinogamuchirwa revashandisi vechikadzi. Inogona kuvanzwa kune vamwe vashandisi, kana iwe usingakwanise kuiwana. Tevedza nhanho idzi kuti uzviitise pane iyo Mi Band 6.
Bhura pasi pasi kuzvinhu zvakavanzika pazasi, tinya pa Plus (+) padhuze nemaCycle. Iwe unofanirwa kuwedzera iyo data kuburikidza neapp pane yako foni app.
Gonesa Bhendi Kukiya paMi ​​Bhendi 6
Kana iwe uri mumwe munhu anoramba achitamba neMi Band yako 6, uye uchida kuwana haptic mhinduro sechiyeuchidzo chekudzokera kubasa. Ipapo iwe unogona kushandisa iyo Lock screen ficha paMi ​​Band 6, inogona zvakare kuuya inobatsira kudzivirira netsaona kubata.
Enda kumasetter, uye tora pakakiya Screen
Bvumira Screen yekukiya pane yako Mi Band 6
Notifications pamusoro Lock Chinovhara
Iye zvino zvawakagonesa iyo yekuvhara screen pane yako Mi Band 6, iwe unogona kuona kwako Notices pane yekuvhara skrini zvakare.
Dzvanya paApp Notifications, uye gonesa iyo show pane yekukiya skrini tendeuka
Kamera Kudzora pane Mi Band 6
Iko zvakare kune chinobatsira chiitiko kudzora kamera shutter bhatani chaipo kubva padiki diki pane yako Mi Band 6.
Vhura kamera pafoni yako
Tinya pane iyo Kamera sarudzo uye tinya chena denderedzwa bhatani kutora foto (iwe unogona zvakare kuunza kamera bhatani kune peji rekutanga reMapurogiramu menyu uchishandisa nzira yataurwa pamusoro)
Ramba kufona neMharidzo paMi ​​Band 6
Kunyangwe hazvo Mi Band 6 isingakutenderi kuti upindure kune zviziviso asi iwe unogona kuramba iyo inopinda kufona neye tsika mhinduro zvakare. Unogona kuve nemhinduro dzinokwana gumi dzinokurumidza dzakachengetwa muApp.
Tinya pane inouya mafoni, gonesa iyo yekuchinja ye pindura neshoko
Rega mvumo yeSMS
Rova zvakasimba kumusoro panguva yekuuya kwekudaira kuti upindure
Tsika Yekutarisa Chiso uye Mufananidzo paMi ​​Band 6
Mubvunzo unowanzozivikanwa wewatchwatch kana smart band ndeyekuti inobvumira kumisikidza pikicha yetsika seyadhi yekurinda. Muchiitiko cheMi bhendi 6, hongu iwe unogona kuseta iyo yechinyakare pikicha seyadhi yekutarisa, asi izvo zvinogona kuitwa chete nemawadhi mashoma ekuona.
Dzvanya paBand Displays
Tinya paInternet, enda kune iyo foto chikamu.
Sarudza marongero aunoda
Click on chinja foto, sarudza mufananidzo, uye shandisa kumeso kwewachi.
Rongedza Tarisa Zviso paMi ​​Band 6
PaMi Band 6 unogona kugadzirisa matatu ekumisidzana maziso ekuona pamwe nekureba-kudzvanya kuratidzwa, asi izvo hazvigoneswe nekutadza. Iyo inogona kuve inogoneswa nekutevera aya matanho:
Enda kumasetings, uye tora paye uye bata chiso chewatch
Gonesa iyo yekuchinja
Iye zvino pfuurira paye pane wachi yekutarisa, swipe kuti uchinje pakati pezviso.
Vhura Laptop uye Runhare neMi Band 6
Mi Band 6 inouyawo nechinhu chinobatsira kwazvo kuvhura laptop yako uchishandisa iyo Mi Blaze Kuvhura App paLaptop yako. Zvakare kana iwe uri kushandisa foni inomhanya paMiUi saka unogona kuvhura foni yako pamwe nekushandisa Mi Band 6.
Pairing Kurambidzwa kweMi Band 6 nemamwe maApp
Kana iwe usingakwanise kubatanidza yako Mi Band 6 mune mamwe maapps pafoni yako, pane mukana wekuti iwe ungangove wakamisa iyo pairing yekumanikidza pane yako Mi Band 6. Inogona kuremadzwa ne:
Pasi peZvimwe Zvirongwa, tinya pazvirambidzo zvekubatana
Ita shuwa kuti toggle yadzimwa
Screen inovhenekera Notification paMi ​​Band 6
Kana yako Mi Band 6 isingavheneke kana iwe wagamuchira chiziviso, kana kana iwe usiri kuda kuti skrini ivheneke pakati pehusiku. Ipapo iwe unogona kugadzirisa aya marongero paBand.
Tinya pane Screen pane pane zviziviso
Rigadzirise sekuenderana nezvaunoda
Aya aive epamusoro 20 Mi Bhendi 6 matipi uye manomano aunofanirwa kuziva nekushandisa pane yako Mi Band kuitira kuti unyatsoishandisa. Zvino chinakidzwa neyako-nyowani yekusimba bhendi sezvo uine nguva huru yekutevera rako rinoshamisa zuva neMi Band yako 6.
Tarisa yedu Mi Band 6 ongorora vhidhiyo yakamisikidzwa pazasi.